ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၃-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၃-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အခွင့်အရေး စိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံထဲ မြန်မာ ပါဝင် click
- မန္တလေး ကိုင်းတန်းဈေးသည်တွေကို ထောင်ဒဏ်ချ click
- ကိုင်းတန်းဈေး ဖျက်သိမ်းမှု ကန့်ကွက်သူတွေကို ထောင်ချ click
- ကချင်စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် အခြေအနေ (ရုပ်သံ) click
- နယ်စပ်တလျှောက် မြန်မာစစ်တပ်က မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ထောင်နေတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စွပ်စွဲ click
- ရခိုင်ပဋိပက္ခအရေး အစိုးရကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု ကင်တားနား ဝေဖန် click
- ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး ၃ ဦး သေဆုံးမှု ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ မစ္စတာ ကင်တားနား တောင်းဆို click
- လားရှိုးအဓိကရုဏ်း စတင်ခဲ့သူ ထောင် ၂၆ နှစ် ချမှတ်ခံရ click
- လားရှိုးမှာ အမျိုးသမီးကို မီးရှို့သူ ထောင် ၂၆ နှစ်ချခံရ click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ အခြေအနေ တင်ပြချက် click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး ကူညီမှု စတင် click
- မလေးရှားကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဇင်ယော်နဲ့ RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ click
- အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် အမြင်လွဲမှားနေမှုတွေ ရှင်းလင်း click
- မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်း လူ့အခွင့်အရေးဆုရ click
- လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြားမှ ကလေးများကယ်တင်ရေး ကုလ တိုက်တွန်း click
- RCSS/SSA နဲ့ SNLD ရန်ကုန်မှာ တွေ့ click
- ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားအဓိက ဖြစ်တယ်လို့ SSA ပြော click
- နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖို့ ရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေ တိုက်တွန်း click
- တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပါတီကြီးတခု တည်ထောင်မည် click
- တိုင်းရင်းသားများ ပူးပေါင်းပြီး ဖက်ဒရယ်ယူနီယံပါတီ တည်ထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် click
- ပီအာရ်စနစ် မကျင့်သုံးဖို့၊ မတရားအသင်းပုဒ်မ ပယ်ဖျက်ဖို့ တိုင်းရင်းသား ၁၅ ပါတီ တောင်းဆို click
- ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင် click
- ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ (ဆွေးနွေးခန်း) click
- ၈၈ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးနဲ့ အမှတ်တရ click
- မင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုကိုကြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ click
- အမေရိကန်ခရီးစဉ်အပြန် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ကို လူ ၃ဝဝ ကျော် ကြိုဆို click
- ကြာသပတေးနေ့ မြန်မာတီဗွီသတင်း (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၂၂) click
- ဦးဝင်းတင်နဲ့ နေထိုင်ခြင်း (၄) click
- EU အထူးကုန်သွယ်အခွင့်အရေး မြန်မာ ပြန်ရ click
- ထိုင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု (ရုပ်သံ) click
- မော်ချီးသတ္တုတွင်းဒေသက ပဋိပက္ခ (ရုပ်သံ) click
- အထက်မင်းလှရေနံမှော်နဲ့ ဒေသခံများ (ရုပ်သံ) click
- မဲဆောက်မြို့က အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန်တိုက်ဟောင်းများ (ရုပ်သံ) click
- နာတာရှည်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်တာဝန် click
- ဟင်္သာတ ပျဉ်မချောင်းရပ်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲ မကျေနပ်မှု တိုင်ကြားစာ click
- ရွှေတွံတေးဆရာတော်၏ BOB ကို ဂျပန်အဖွဲ့ လာရောက်လေ့လာ click
- သီးလေးသီးမှ ပန်းသီး နုတ်ထွက်တော့မည် click
- ပရိသတ်အား ကျေဇူးဆပ်သည့် အနုပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံ click
- လမ်းသား မြှင့်လိုက်ပြီဗျ (ကာတွန်း) click
- တူရကီ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲက ဖြိုခွဲခဲ့ရာမှာ ညလုံးပေါက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ click
- ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ တူရကီဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံ click
- ဂီဇီပန်းခြံ မွမ်းမံရေး လူထုဆန္ဒခံမယ် click
- အီရန်ရွေးကောက်ပွဲ ခန့်မှန်းချက် (ရုပ်သံ) click
- ဆွေးနွေးပွဲပျက်ရခြင်းအတွက် တောင်ကိုရီးယား မြောက်ပိုင်းကို ပြစ်တင် click
- ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးကို အခွန်လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲ click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:31 PM
အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက် စိန်စီသောည နောက်ပိုင်း အစိုးရအပေါ် ပြည်သူတွေက နင့်သီးခါးသက်စွာ အမုန်းတရားကြီးစိုးမှု ရေချိန်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေချိန်မှာ အစိုးရနောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ထားတဲ့ ဂျာနယ်တစ်ချို့မှာ စကားလိမ်တွေသုံးပြီး အာဏာရူးမှူးကြီးသန်းရွှေ.. စတဲ့အာဏာရှင်ကို အာခံတဲ့ စာတွေ၊ စကားထာတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ မြိုသိပ်ထားရတဲ့ မကျေနပ်မှုတွေကို ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲ စိတ်တင်းအားကို တနည်းတဖုံ ဖြေလျော့စေခဲ့တယ်။ ပေါက်ကွဲတော့မယ့်ပူပေါင်းတွေကို လေးနည်းနည်းလျှော့ပေးပြီး ထိန်းထားတာမျိုးပေါ့။ ဒါမျိုးတွေကို မှူးကြီးသန်းရွှေ သိပ်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်လည်း အတူတူပါပဲ။
ပြောချင်တာက အဲဒါနဲ့ခေတ်ပြိုင် စစ်အစိုးရက သူတို့ကို အာခံမယ့်အရိပ်အရောင်ပြတဲ့ ဘယ်အနုပညာသမားကိုမဆို အကြီးအကျယ်နှိပ်ကွပ်၊ ဘ၀ပျက်သည်အထိ ဖိနှိပ်ခြိမ်းချောက်နေချိန်မှာ မသိမသာ လွှတ်ပေးထားပြီး အစိုးရကို အာခံတဲ့ပျက်လုံးတွေနဲ့ နာမည်ရလာတာကတော့ သီးလေးသီးပါပဲ။ ပြည်သူတွေလည်း သူတို့ရဲ့ ဟာသလေးတွေနဲ့ မကျေနပ်မှုတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စိတ်ထွက်ပေါက် ရစေခဲ့တယ်။ သူတို့တွေဟာ ခေတ်ကြပ်ကြီးထဲမှာ ထူးဆန်းစွာပဲ ဘေးမသီရန်မခပဲ အောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ပတ်စပို့လည်း အလွယ်တကူရပြီးတော့ ကမ္ဘာပတ်ပြီးတော့တောင် အသုံးတော်ခံလိုက်ပါသေးတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာ သူများတွေလို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် သွားစရာမလိုပဲ အိမ်ထောင်သားမွေးတောင် လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ သူတို့ကို ကြိုးကိုင်ထားသူက ထောင်ထဲကဆရာကြီး၊ အဲဒီဆရာကြီးကို ကြိုးကိုင်ထားတာက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
အခု သူတို့တာဝန်တွေ ပြီးသွားပြီဆိုတော့ အဖွဲ့ကို မသိမသာ တကွက်ခြင်းရွှေ့ပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်မယ်။
ဟုတ်တယ်လို့တော့ အပိုင်ကြီး မပြောနိုင်ပါဘူး။ ထူးဆန်းတဲ့ အချက်လေးတွေ တွေ့နေရလို့ အရင်ကတည်းက သတိထားကြည့်နေမိလို့ပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေ အင်မတန် နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နံရံအားလုံးမှာ နားတွေရှိတယ်။
မြန်မာ.နိုင်ငံရေး က ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး ထဲကို မဏ္ဍိုင် ပြု ထား
တာ အားလုံး အသိပါ ။
အဲဒီ ပြည်သူ.မဏ္ဍိုင် ဖြစ်တဲ.ဒေါ်စုရယ် ၊ သမတကြီးအပါအ၀င် လွှတ်တော်ထဲက အများစုရယ်
တို.ဟာ တပ်ချုပ်ကြီး စေခိုင်းတဲ.အတိုင်း က နေကြရတာတွေ.ရတယ် ။
နတ်က က လိုက် ၊
ဘီလူးက က လိုက်နဲ. ၊
... ဒေါ်စုကတော. ၂၀၁၅ အတွက် သမတ ဖြစ်ချင် လို. ။
... ကျန်တဲ.သူတွေကတော. ............ ဒီလမ်း ဘဲ ရှိလို. ။
အားလုံး ခြုံ ကြည်.ရရင်တော.
..... တပ်ချုပ်ကြီး တော်ပါပေတယ် .. လို.ဘဲ